မုန့်ဦးနှောက် | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
ဗမာမုန့်တွေထဲက အကြိုက်ဆုံးမုန့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ငယ်ငယ်က လမ်းထဲမှာလာရောင်းတဲ့အသယ်တွေထဲမှာ မုန့်ဦးနှောက်သယ်လာရင် အမေ့ကိုဝယ်ကျွေးဖို့ပူဆာမိဆုံးပါ။ မုန့်ဦးနှောက်ပျော့ပျော့လေးပေါ်ကို အုန်းနို့ဆမ်းသကြားဖြူး ထားတာကို အရမ်းကြိုက်တာပါ။ ဒီရောက်တော့လုပ်စားချင်တာနဲ့အမေ့ကို မေးရပါတယ်။ ခုအိသက် ၂ခုစာပဲလုပ်တာပါ။ လုပ်ရတာလွယ်လွန်းလို့စားချင်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်း လုပ်လိုက်တာပါပဲ။
-ဆား ဇွန်းထိပ်ဖျားခန့်( အချိုဇွန်း)
အထက်ပါအားလုံးကိုရောမွှေပါ။ဖက်ရွက်ကို ပျော့သွားအောင်၅မိနစ်လောက် ပေါင်းပါတယ်။ ငှက်ပျောရွက်စိမ်းက မုန့်ထုပ်နေတုံး အထိမခံ ကွဲတတ်လို့ပါ။ ပြီးရင်ဖတ်ရွက်ကိုဆီသုတ်ပြီး မုန့်သားများခင်းကာ ထုတ်လိုက်ပါ။
ထို့နောက် ၁၅မိနစ်ခန့်ပေါင်းလိုက်ရင် မုန့်သားအိအိလေးနဲ့မုန့်ဦးနှောက်ရပါပြီ။
မုန့်ဦးနှောက် လေးများကို အတုံးလေးများတုံးကာ အုန်းနို့ဖြူး သကြားဖြူးကာ စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
အကယ်၍ ဖတ်ရွက်အဆင်သင့်မရှိရင်ဘူးကိုဆီသုတ်ပြီးဗူးထဲ ထဲ့ကာပေါင်းနိုင်ပါတယ်။
32 comments on “မုန့်ဦးနှောက်”
02/05/2012 @ 3:22 am
arrhhhh!!! that’s my favorite burmese snacks. i m drooling all over the place and it did remind me of my childhood. thanks for sharing
02/05/2012 @ 3:31 pm
02/05/2012 @ 4:14 am
02/05/2012 @ 4:19 am
Sister thanksalot for your recipe!!!
welcome par 🙂
02/05/2012 @ 11:12 am
02/05/2012 @ 3:32 pm
welcome par nyi ma yay 🙂
Sandi su mon
02/05/2012 @ 11:34 am
Thanksalot for post every single dish ,my dear . May I know need to add water or not ?thanks
just coconut sandy 🙂
04/05/2012 @ 4:29 pm
Thanksalot my dear eithet for yr reply .i m proud of u my dear fri 🙂
04/05/2012 @ 5:19 pm
thank you for ur support chit fri lay 🙂
02/05/2012 @ 12:38 pm
Thank you for sharing the recipe. Will try to do it very soon.
02/05/2012 @ 4:11 pm
Ei thet yay,
That would be my another time donation to our monastery festival…..keep going…..and I’m still waiting to hear from u to make pe` tway….coz my hubby is vegetarian 4ever….love ur blog so much.
03/05/2012 @ 12:45 am
thanks for sharing recipe sis , I love it much,,, btw what kind of coconut can should i need to add ? i mean cream type or liquid ?
03/05/2012 @ 6:02 pm
whatever sis u can use. just boil it till u get coconut oil.
03/05/2012 @ 3:51 am
အမ ရေ ဟိုတစ်ခါ ပဲသွေး လုပ်နည်းလေး တင်ပေးမယ်ဆိုလို့ မျှော်နေပါတယ်
အမ အားရင် တစ်ချက်လောက်တင်ပေးပါနော်
03/05/2012 @ 6:00 pm
hote p hote p nyi ma lay 🙂
03/05/2012 @ 7:19 pm
Sis, de ka lae Pe Tway ko myaw nay tar kyar pe….myan myan lay tin pay par naw…love u so much… Mwah….mwah…
04/05/2012 @ 3:45 am
အမရေ ဇာခြည်လုပ်တာ မုန့်ကမာသွားတယ် ဇာခြည်လည်းအရမ်းကြိုက်တာ အဲဒီမုန့်ကိုလေ..အုန်းနို့ခရင်မ်ကိုများသုံးမိလို့လားမသိဘူး ဒါမှမဟုတ် ပေါင်းတာပဲကြာလို့လား သိတော့ဘူး..:) မုန့်လုပ်နည်းတွေတင်ပြပေးတာကျေးဇူးတင်တယ်နော်
04/05/2012 @ 11:24 am
18/09/2012 @ 4:28 am
ဟုတ်တယ် မအိသက်.. ညီမလည်း မာသွားတယ်။ နောက်တခေါက် ဆန်မှုန့်ကို လျော့ထည့်ပြီး ရေနည်းနည်း ထည့်ကြည့်တော့လည်း မာတာပဲ။ ဘာမှားနေလည်းမသိဘူး။း(
18/09/2012 @ 5:57 pm
ညီမရေ အမက ပေါင်းတာနဲ့အဆင်ပိုပြေတယ် ကျိုပြီးအအေးခံစားကြည့်ပါ အတူတူပဲ။ 🙂
26/05/2012 @ 1:57 am
sis ..I am also fail. My one also the bottom part was turned to hard and the upper part was still in under-cook ..I dont know why its turned like this because I steamed exactly 15mins and i used take away container ..:(
28/05/2012 @ 6:49 pm
02/06/2012 @ 4:18 am
i just did it but it’salittle harder than the one i remember from Yangon.. my sago needsalittle more cooking and I think my measure for rice flour isalittle bit more.. I steam 15 mins too. I’m gonna try it again later.. thanks for your recipe ma ei thet, i got the idea, justalittle bit of adjusting measures.. 🙂
21/06/2012 @ 9:10 am
အစ်မရေ .. အုန်းနို့ ဗူးတစ်ဝက်ဆိုတာ လီတာနဲ့ဆို ဘယ်လောက်ရှိလည်းသိချင်လို့ပါ။ မမှန်းတတ်လို့း)
21/06/2012 @ 10:20 am
200 ml sis 🙂
May Thwet Zaw
07/05/2013 @ 5:58 am
14/05/2013 @ 12:56 am
That’s my favourite too :))
Thanks for your recipe nyi Ma lay, I ‘ll try :)))
14/05/2013 @ 11:47 pm
hote , thanksama
01/01/2015 @ 8:58 am
အမ ညီမလုပ်​​တာလည်း မုန့်​ကမာ​နေတယ်​ စားလို့အဆင်​မ​ပြေဘူး ဘယ်​လိုလုပ်​ရပါ့